भाग्यमानी मान्छेले मात्रै देख्ने, दाहिने शंख फोटोमा छोएर ॐ लेखी दर्शन गर्नुहोस। | सुदुरपश्चिम खबर
भाग्यमानी मान्छेले मात्रै देख्ने, दाहिने शंख फोटोमा छोएर ॐ लेखी दर्शन गर्नुहोस।
प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न प्रयोजनमा ल्याइ ने शंख एक प्रकारको समुद्री चिप्लेकिराको कडा आवरण हो यो समुन्द्रको किनार मा पाईने गर्दछ। धार्मिक अवसर एवम् सांस्कृतिक कार्यमा यसलाई फूकेर बजाउन पनि सकिन्छ। तसर्थ यसलाई एक बाजाका रूप मा पनि लिइन्छ।
नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश आदि मुलुकमा यसको यसरी प्रयोग भएको पाइन्छ ।
४ सन्दर्भ किसिम सम्पादन गर्नेेशंख विभिन्न किसिमका हुन्छन्, तीमध्ये दाहिना शंख बहुमूल्य मानिन्छ, जुन निकै महँगो हुन्छ ।
लाखौं शंखमा दाहिना शंख एउटा पाइन्छ । हिन्दू धर्ममा प्रयोगसम्पादन गर्नेरामायण, महाभारतमा शंख को महिमा प्रसस्त छ भने हाम्रो समाजमा मंगल कार्यदेखि मृत्युजन्य शोकको घडीमा समेत शंखवादनलाई महत्त्व दि इन्छ । शंख बजाउँदा त्यसको ध्वनिले विभिन्न प्रकारका रोगाणु र विषाणुलाई मार्ने वर्णन ऋग्वेदमा छ ।
शंख महा भारतमा वर्णित एक राजा विराटको एक पुत्रको नाम पनि थियो। यो हिन्दु धर्ममा अति पवित्र मानिन्छ। यो धर्मको प्रतीक मानिन्छ। यो भगवान विष्णुको दायाँ माथिल्लो हात मा शोभायमान देखिन्छ।
बिहान र बेलुकी आरती गर्दा शंख बजाइन्छ । पूजापाठ सुरू गर्दा र सकिने बेलामा पनि शंख बजाइन्छ । कतिपय जातिमा मुर्दालाई घाट लैजाँदा शंख बजाउने चलन छ । औषधीका रूपमा प्रयोगृसम्पादन गर्नेेआयुर्वेद उपचारमा शंख भस्मको ठूलो महत्त्व छ ।राखेर पाँचरछ फिट गहिरो खाल्डोमा गुइँठाले पोलेर निकाली घ्यूकुमारीको रसमा पिन्नु पर्छ । यसमा क्याल्सियम, क्याल्सियम सल्फेट, म्याग्नेसियम आदि तत्त्व प्रसस्त पाइन्छन् । शंख भस्म अम्लपित्त, अनुहारको चाया, डण्डीफोर र खत हटाउन उपयोगी हुन्छ ।
यी संकेतबाट थाहा पाईन्छ गर्भमा छोरा छ कि छोरी ? सबैको जानकारको लागि सेयर गरौं
जुन घरमा गरिन्छ यी ४ काम, त्यहाँ हुन्छ लक्ष्मी माताको वास !! भेटी सम्झी सेयर गरौं